Gentoo အတွက်ပုံပြင်အသစ် FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ChrisADR | | NOTICIAS
ယခုသီတင်းပတ်များကဲ့သို့ပင် Gentoo စာပို့စာရင်းသည်ဖြန့်ဝေခြင်း၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းများပြည့်နှက်နေပြီး၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည်ဤဆောင်းပါး၏အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်သည့်အထိကျွန်ုပ်အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းအကြောင်းကိုသမိုင်းကြောင်းအနည်းငယ်သိသွားမှာပါ။
3 Gentoo ၁.၀
7 GLEP ၃၉
9 အပြီးသတ်စမ်းသပ်မှု, နှစ်
10 "Gentoo အတွက်အစီအစဉ်"
လွန်ခဲ့သောအနှစ်တစ်ထောင်သို့ပြန်သွားသည်။ ၁၉၉၉ တွင် Daniel Robbins သည်အခြားဖြန့်ဝေမှုများမှကြိုတင်ကြံစည်ထားသောစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီချိုးဖောက်လိုသည့် Enoch Linux ၏ပထမဆုံးမူကွဲကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အဓိကအယူအဆမှာသုံးစွဲသူရဲ့ hardware ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့်မလိုအပ်တဲ့ package တွေမရှိတဲ့ system တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဖြစ်တယ်။
En နောက်နှင့်အနည်းငယ်နှောင့်ရှက်။ သော်၊ FreeBSDUNIX operating system တစ်ခုနှင့်သူတွေ့ဆုံခဲ့သည် ဆိပ်ကမ်းများ, စနစ်ရဲ့အထုပ်ထိန်းချုပ်မှု tool ကို။ သင်စိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည့်အတိုင်း၊ ports သည် binaries များရရှိရန်အစား program များကို compile လုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ၎င်းအတွက် tool ကိုအသုံးပြုသည် pkg.
၂၀၀၂ တွင်ပင် Gentus သည်အလွယ်ဆုံး bug ကိုပြင်ဆင်ပြီးသောအခါတွင်၎င်း၏တရားဝင်အမည်ကိုအမြန်ဆုံးပင်ဂွင်းငှက်များဟုအမည်ပေးပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်ပထမဆုံးသောတရားဝင် version ကိုပြသနေသည်။ ဤမှတ်တိုင်သည်နှစ်များအတွင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သောရှည်လျားသောစီးပွါးရေးပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးအကြီးဆုံးသောအရာများကိုအာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ Gentoo တွင်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ကုမ္ပဏီတွင်တိကျသောကုမ္ပဏီမရှိသောကြောင့်အသိုင်းအဝိုင်းသည်နောက်ဆုံးတွင် developer များနှင့်အသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဆိုနီနှင့်ဂူဂဲလ်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီကြီးများသည်သူတို့၏စနစ်များကိုတိုးတက်စေရန် Gentoo ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကြောင့်၎င်းကိုတည်ထောင်သူသည် Gentoo ဖောင်ဒေးရှင်းသို့လွှဲပြောင်းပေးရသောကြောင့်၎င်းသည် Gentoo အတွက်အထူးခက်ခဲသောနှစ်ဖြစ်သည်။ Gentoo တွင်လူကြိုက်များမှုကြောင့်လူအများအပြား Gentoo ကိုစတင်အသုံးပြုလာကြပြီးကိန်းဂဏန်းများမှာအလားအလာကောင်းများရှိသည်။ သို့သော်လျှင်မြန်သောတိုးတက်မှုကြောင့်မူဘောင်ကိုမှန်ကန်သောအတိုင်းအတာနှင့်ကိုက်ညီရန်ခက်ခဲစေသည်။ ဤစီမံကိန်းများစွာကို“ အားလပ်ချိန်” တွင်ပြုလုပ်သည်ကိုအမြဲတမ်းသတိရပါ၊ လူအမြောက်အမြားကိုထိန်းချုပ်ရန်လူအများလုံလုံလောက်လောက်မရှိလျှင်နာမည်ကြီးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုတော့မဖြစ်နိုင်ပါ။
လုံလောက်သောဖွဲ့စည်းပုံမရှိခြင်းနှင့်အတွင်းပြောက်ကျားစီးရီးများကြောင့် Gentoo သည်နောက်ထပ်ခက်ခဲသောနှစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Gentoo သည် GNU / Linux လောကသို့နစ်မြုပ်သွားပြီးအလယ်တန်းဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်လာသည်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဒံယေလသည်တက်ကြွသောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတီထွင်သူအဖြစ်ပြန်လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်သော်လည်းနှစ်ဖက်စလုံးမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွဲပြားမှုများနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများအပြီးတွင်သူသည်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်မကြာမီအနားယူရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မကြာမီတွင် Funtoo Linux, Gentoo အပေါ်အခြေခံသည် distro, ဒါပေမယ့်အဲဒီအခြိနျ၏မတည်မငြိမ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျော်လွှားနိုင်မအချို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပြုပြင်မွမ်းမံအတူ။
Gentoo Linux စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအဆိုပြုချက် (GLEP) သည်အသိုင်းအဝိုင်းအားနည်းပညာနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုအဆိုပြုသည့်စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်သည်။ GLEP သည်အသိုင်းအဝိုင်း၏လိုအပ်ချက်နှင့်အဆိုပြုချက်၏ရှင်သန်နိုင်မှုပေါ် မူတည်၍ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ မဲပေးခြင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေသည်။ အထူးသဖြင့် GLEP 39 သည် Gentoo Linux အတွက်တည်ဆောက်မှုအသစ်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်လိုသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်များစွာသောစီမံကိန်းများနှင့် developer များ၏အစီအစဉ်နှင့်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်အထိဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဖြစ်ပေါ်နေသောရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုတိုးတက်စေရန်ရပ်ရွာ၊ တီထွင်သူများနှင့်အသုံးပြုသူများကတုန့်ပြန်မှုသည်သေချာသည်။
ဤအချိန်အားဖြင့်, Gentoo ပြည်တွင်းရေးပြောက်ကျားများနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုမရှိခြင်းကနေအလွန်ခံစားခဲ့ရသည်။ သုံးစွဲသူများနှင့် developer များစွာသည်အငြိမ်းစားယူပြီး၎င်းသည်သေခြင်းကိုစောင့်မျှော်နေသောစီမံကိန်းအသေးစားတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သို့သော်အံ့အားသင့်စရာကောင်းသည်မှာအရာအားလုံးရှိသော်လည်းအဆင်မပြေမှုများအားလုံးအနေဖြင့်၊ Gentoo ကိုအပြောင်းအလဲများသည် ပို၍ တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် developer များနှင့်အသုံးပြုသူများလျော့နည်းလာခြင်းကြောင့် (ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်များဖြစ်နိုင်သည်) သငျသညျစီမံကိန်းအသစ်များကိုအပေါ်စတင်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အမာခံမှာ Gentoo တိုးတက်လာဖို့နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
ထိုအချိန်ကတည်းကပင် ၁၀ နှစ်ကြာခဲ့ပြီးနောက်များစွာပြောင်းလဲသွားပြီး၊ အခြားအရာများမပါ ၀ င်ပါ၊ ထိုအချိန်ကသတ်မှတ်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံကိုတည်ဆောက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်များစွာလေ့လာသင်ယူထားပြီး၊ အသစ်သော developer များရောက်ရှိလာပြီးအခြားသူများမှာလည်းရှိသည်။ ဆုတ်ခွာခဲ့ကြသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Gentoo သည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ဤအသစ်သောဉာဏ်ပညာသည်ရွေးချယ်ခြင်းပုံစံများနှင့်ပုံစံများ၊ ပြproblemနာဖြေရှင်းခြင်း၊ စီမံကိန်းတင်ဆက်ခြင်းများတွင်ထင်ဟပ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၎င်းတို့သည်သူတို့၏စိတ်ကိုဖန်တီးထားသည်။ ဤရွေ့ကား, ဤသည်နောက်တဖန်ယခုအပတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏။
ဒီဟာက ဘှဲ့ ဤဆောင်းပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စကားဝိုင်း၏အကြောင်းအရင်းမှပြည့်စုံသောမှတ်တမ်းများမရှိသေးသော်လည်း၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ Gentle နှင့် Funtoo တို့အကြားပိုမိုဆက်သွယ်မှုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ရပ်ရွာစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးမှထူးခြားသောပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဒန်ယဲလ်သည်လိုလားသည်။
၎င်းကိုယခုစာရင်းထဲတွင်ဆွေးနွေးထားသည်။ ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်မှာဒံယေလသည်တက်ကြွစွာထက်ပိုပြီးပြန်လာပြီး Gentoo စီမံခန့်ခွဲမှု (ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး အနေဖြင့်) ကိုကူညီလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်အတွက်သင်ပြီးသား developer ပဟေtakingိယူပြီးနေကြသည် commit-access မပါပဲ, IRC မှတဆင့် Gentoo စုဆောင်းသူ (များသောအားဖြင့် developer) နှင့်လျှောက်ထားသူအကြားအင်တာဗျူးများစွာကိုပြုလုပ်သည်။ ဤအင်တာဗျူးများတွင်ပဟေizိမေးခွန်းများကိုတစ် ဦး ချင်းစီပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၎င်းတို့သည်ရပ်ရွာ၏ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်၊ မည်သို့ရှေ့ဆက်ရမည်၊ မည်သို့အဆိုပြုရမည်နှင့်ကိစ္စရပ်များကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်သည်။
အပိုမှတ်စုတစ်ခုအနေနှင့်ပြုလုပ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းဆွဲသောဉာဏ်စမ်းပဟေquိတစ်ခုရှိသေးသည် ကျူးလွန်ပိုင်ခွင့်, ဒီဖိုင်များကိုတိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းဆိုလို .ebuild ဘာဖြစ်တာလဲ .deb o .rpm အသီးသီး debian သို့မဟုတ် redhat ပေါ်မှာ။ ၎င်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်အစီအစဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပိုမိုတိကျခိုင်မာသည်။
အင်တာဗျူးပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် Gentoo developer မှသင်ကြားပို့ချပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူသည်လျှောက်ထားသူအားလုပ်ငန်းစဉ်များကိုရှင်းပြပြီးအဖြေများရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်လမ်းညွှန်ပေးသောသူဖြစ်သည် (အရာအားလုံးကိုကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အတွက်ဆရာမပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိသော်လည်း၎င်းမှာလိုအပ်သည်။ သူ / သူမသည်အင်တာဗျူးသူကိုတောင်းဆိုသူဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမိုင်းဝါဒဟုမယူမှတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထပ်တူအမှားများမပြုလုပ်လိုပါက၎င်းကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်ကိုသိရှိခဲ့ရသည်။ ပရိုဂရမ်းမင်းကဲ့သို့ပင်အတိတ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာကိုသိခြင်းကအနာဂတ်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်သင်ကြားပေးသည်။ ဤသည်မှာ Gentoo စာပို့စာစောင်များတွင်ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်များစွာအတွက်အဆက်မပြတ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ နှစ်များကုန်လွန်သွားခြင်းနှင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အသက်အရွယ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျှော်လင့်ချက်ရှိလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော Gentoo ကိုတည်ဆောက်ရန်အတူတူပင်ရှာဖွေနေကြသည်။ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားနှင့်ဤတွင်ရောက်ရှိခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်🙂
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » Gentoo အတွက်ပုံပြင်အသစ်
အကယ်၍ နိုင်ငံရေး - စီးပွားရေးအတန်းအစားကိုရွေးချယ်ပါကဆိုးရွားသည့်အရင်းရှင်စနစ် (Friedmanites) နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဆိုင်ရာပြည်နယ်၏အဓိကအမြင်နှင့်အခြားကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်။
သူတို့ဟာ Machado လမ်းလျှောက်နေရင်းလမ်းလျှောက်နေကြသည်။
José J Gascónအားပြန်ပြောပါ
Funtoo ကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ၊ ဒီ distro (Funtoo) ကိုဖန်တီးဖို့ဒံယေလကိုဘာကြောင့်ဖန်တီးခဲ့တာလဲ။
သူဟာမိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှာရှိနေတုန်းသူက Gentoo ကိုပြန်လာပြီးစီမံကိန်းမှာမပါဝင်တော့သူ Funtoo ကိုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
မင်း Funtoo ကိုသုံးဖူးလား၊ Gentoo နဲ့မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုမင်းသုံးဖူးသလားသိချင်တယ်။
ကောင်းသော post! အမြဲတမ်း🙂
ကောင်းပြီ၊ ဒယ်နီယယ်သည်တစ်စုံတစ်ရာသောအချိန်တွင်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ "မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ကြားရန်ဖြစ်သည်" ဟုဒယ်နီယယ်သည်အလုပ်သမားအကြောင်းပြချက်ဖြင့် Microsoft ၌ရှိခဲ့သည်။ သူသည် Gentoo မှထွက်ခွာသွားစေသည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းပြီးနောက်သူသည်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ဤအချိန်တွင်အခြေအနေဆိုးသော developer များနှင့်အနည်းငယ်တင်းမာနေသည်။ ပွတ်တိုက်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုများသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်ပိုမိုတင်းမာလာခဲ့သည်။ ကွဲလွဲနေသည့်အချိန်တွင်ဒန်နီယယ်သည်ရန်လိုသောအသိုင်းအဝိုင်းမှထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး Gentoo ၏မူကွဲအသစ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အချို့သောသူများပြောသည့်အတိုင်း Funtoo သည် portage နှင့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများရှိသည်။ ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းတစ်ခု၏အစီအစဉ်သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံရှုပ်ထွေးပြီး၊ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒီနေ့ဒံယေလသည် Portage ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမြဲတမ်းအထောက်အကူပြုခဲ့ပြီး Gentoo package manager တွင်ပြောင်းလဲမှုအသစ်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်နေသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Funtoo ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမစမ်းသပ်ခဲ့ပါ၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကောင်းသောအရာများကြားခဲ့ရသည်။ ယခုအချိန်တွင်ကွဲပြားခြားနားမှုများသည်စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဦး တည်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ Funtoo ၏ ဦး စားပေးများကို၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
gentoo ဆိုတာသုံးစွဲသူတစ်ယောက်ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုင်တွယ်ရမယ့်အရာဟာတကယ်ခက်ခဲတယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလား။ ငါဆိုသည်ကား, ပုံနှင့်မသိသောထံမှကြောင့်ပုံမှန်အသုံးပြုသူသည်မဟုတ်ဘဲ GNU linux ကို၏ပရိုဂရမ်မာသို့မဟုတ်ကျောင်းသားမဟုတ်, gentoo ကမွမ်းမံရန်နှင့်ပြproblemsနာများအခမဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့ကြီးမားတဲ့ရှုပ်ထွေးရှိပါတယ်, portage သတင်းတွေအများကြီးကိုထည့်လေ့မရှိ, compilations အချိန်ယူပုံရသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခြား binary distros များထက် ပို၍ နည်းပါးသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော်လည်းပိုမိုလွယ်ကူစွာပေါ့ပါးသောနှစ်များကိုတွေ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် gentoo နှင့်စပ်လျဉ်း။ နောက်ဆောင်းပါးသည် gentoo ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ထားသည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
အတိုချုပ်: မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် "သာမန်" အသုံးပြုသူအတွက်ခက်ခဲသည်ဟုမထင်ပါ။
ဒါဟာ Gentoo ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ကွေးကမတ်စောက်နေတယ် (Vim ကိုကျွန်တော်စလေ့လာတုန်းကနည်းနည်းလေးသတိရစေပါတယ်)၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါတစ်ခုကတော့ GNU / Linux ဟာရှုပ်ထွေးမှုကိုဖုံးကွယ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖြတ်သန်းနေရလို့ပါ။ ရှုပ်ထွေးသောအရာတစ်ခုခုသည်၎င်းအားမဖြစ်စေနိုင်ပါ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောအရာတစ်ခုကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းကိုဆိုးရွားစေသည်။ သို့သော် Windows 🙂 Hidden ရှုပ်ထွေးမှုသည်အခြားအရာများထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။
ယခုငါ, ငါ, ငါ gentoo မတည်ငြိမ်သော (စမ်းသပ်) အကိုင်းအခက်ပေါ်တွင်တစ်ပတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲများများစွာရှိပါကသုံးရက်လျှင်ဆက်လက်တည်ရှိရန်အမိန့်နှစ်ခုကို run ဖို့သာရှိသည်:
-avuD @world ပေါ်ထွက်လာ
-ask -verbose -update -deep @world ပေါ်ထွက်လာပါ
ပထမ ဦး ဆုံး repository ကို syncs (#apt update ကဲ့သို့)
ဒုတိယအချက်မှာကျွန်ုပ် install လုပ်ထားသောပရိုဂရမ်များအားလုံးနှင့်သူတို့၏မှီခိုမှုများ (#apt upgrade) ကိုအသစ်ပြောင်းသည်။
အစပိုင်းတွင်သတင်းနှင့်အမှားအယွင်းများကိုနားလည်ရန်အနည်းငယ်ခက်ခဲကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်ရသော်လည်း၊ ပထမအခက်အခဲကိုကျော်လွှားသွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကိစ္စရပ်များသည်ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလာပြီးပိုမိုပြည့်စုံလာသည်။ (ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးမှသာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သော်လည်းအမှားတစ်ခုစီတွင်အလွန်အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာတစ်ခုရရှိခဲ့သည်။ 🙂)
၎င်းသည်သာမန်အသုံးပြုသူကိုအမှီသဟဲပြုရန်ကူညီရုံသာမကအမှန်တကယ်လွတ်လပ်မှုဖြစ်သော GNU / Linux ၏အနှစ်သာရဖြစ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းသူသင်ကြားပေးသည်။
နောက်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ binary ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် "သုံးစွဲသူများ" အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ နှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိ, Gentoo ကိုအသုံးပြုရန်သင်နည်းပညာအတွက်အထူး penchant, ဒါမှမဟုတ်ထိရောက်မှုအတွက်အလွန်ပြင်းထန်လိုအပ်ချက်ရှိရမည်။ ၎င်းသည်လည်း GNU / Linux အတွက်လှပသောအရာဖြစ်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောအဆင့်ကိုသင်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်။ Gentoo သည် software ၏ရှုပ်ထွေးမှုကိုဖုံးကွယ်ရန်မကြိုးစားပါ၊ ၎င်းအစားအသုံးပြုသူအားသူတတ်နိုင်သမျှရှုပ်ထွေးမှုကိုသင်ပေးသည် အပိုင်းတစ်ပိုင်းစီနှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ၊ ၎င်းသည်တာ ၀ န်ယူရမည့်အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွမ်းကျင်သောအခါ၎င်းသည်ပိုမိုကျေနပ်မှုရရှိစေသည်။ 🙂
အလုပ်မှာသူတို့ကငါတို့ကို Windows 10 ထားတယ်။ ငါ gnome ကိုအိမ်မှာ ၄ နှစ်လောက်သုံးနေတယ်၊ ​​windows4ကငါ့ကိုကြောက်စရာကောင်းပုံရတယ်၊ ငါ့ကိစ္စအတွက်၊ ကျွန်တော့်အမြင်အာရုံပြwithနာနဲ့အတူငါ gnome manjaro ကို windows 10 ထက်ပိုကြီးတဲ့စက်နဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။ သီးသန့်ဖြစ်သည်။
Alvarito ၂၅ ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါး၊ မင်းရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုမတွေ့ခင် Gentoo တည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး၊ အခုငါ Raspbian ကနေ Gemtoo ကိုပြောင်းတော့မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Firefox Quantum ရှိအချက်အလက် URLs
Chamilo LMS - လူတိုင်းအတွက် e-learning